Fumanisa ukuba uza kubona ntoni eWales, United Kingdom | IBezzia
Yintoni ongayibona eWales, eUnited Kingdom
Susana Garcia | 24/03/2021 10:00 | yokuPhila, Uhambo
I-Wales yinxalenye ye-United Kingdom kwaye lelona candelo lihle esinokulibona. Ukuthatha uhambo oludlula kule ndawo isemazantsi yinto enomtsalane, kuba sifumana imihlaba emangalisayo kunye neelali ezintle. Kuyaziwa ngokuba ngumhlaba oneenqaba ezininzi, nanjengoko yayiyindawo ekhuselweyo kakhulu, kodwa kunye needolophu ezincinci nezinomtsalane kunye nemihlaba eya kuthi isuse umphefumlo wethu.
Ngokuqinisekileyo kufanelekile cinga uhambo oluya kwindawo yaseWales, kuba siya kuthandana nale ndawo. Esona sizwe sincinci e-United Kingdom kodwa asinanto yakubamonela abanye. Siza kubona ezinye zeendawo eziphambili zokundwendwela eWales.
1 ICardiff, ikomkhulu
2 I-Swansea, isixeko sakhe sesibini
3 Conwy, idolophu ebukekayo
4 Ipaki yeSizwe yaseSnowdonia
5 ILlandudno, yonwabela isitayile seVictorian
ICardiff likomkhulu leWales kwaye ke kufuneka ubone. Iyabonakala inqaba yayo ethandanayo ukusukela ngexesha lolawulo lwamaRoma nangona ibilungiswa kakhulu kunye nolwandiso kwimbali yonke. Into engafanele iphoswe yiClock Tower kunye noDonga lwezilwanyana. Emva koko sinokundwendwela indawo yaseCastillo, eyona ndawo ithengisa kakhulu kwaye inomdla. Kukwafanele ukubonwa yiPaki entle iBute, enye yeepaki ezinkulu zedolophu yase-UK, emi kuMlambo iTaff. Ndwendwela iigalari ezindala ezintle iRoyal Arcade, indawo yokufumana izikhumbuzo kunye nezinto zakudala. Iyaqhubeka notyelelo kwiNtengiso eNkulu ukubona iimveliso eziqhelekileyo kunye noMyuziyam weMbali.
I-Swansea, isixeko sakhe sesibini
Esi sesona sixeko sikhulu kwaye sibaluleke kakhulu eWales, sisenza enye indawo yokundwendwela. Iziko lalo laphinde lakhiwa emva kweMfazwe yesibini yeHlabathi ngokudubula ngebhombu. Ungayibona iCastle Square kwaye undwendwele iSitalato iOxford, indawo yayo yorhwebo. Intengiso yayo enkulu nayo iyabonakala, kunye neemveliso eziphambili zesisu eWales. Kule ndawo kufuneka uhambe ngebheyi entle kwaye udlule kwi-Mumbles Lighthouse, indlu yayo edumileyo yokukhanya.
Conwy, idolophu ebukekayo
EWales sineedolophu ezintle ezinomtsalane, njengeConwy eMantla eWales. Idolophu ebiyelweyo ebhengezwe njengeNdawo yeLifa leMveli yeHlabathi. Iyabonakala ngenqaba yayo enkulu ye-XNUMXth century oko ngokungathandabuzekiyo kutsala umdla wethu kwaye oko kugcina inxenye yodonga lwayo. Kwindlu yokuhlala unokubona indlu yePlas Mawr enobugcisa obuhle buka-Elizabethan. Sinokutyelela nendlu encinci eyeyona intle eGreat Britain kunye nezibuko, entle kakhulu.
Ipaki yeSizwe yaseSnowdonia
Le paki intle yesizwe ikwi I-Northwest Wales izele ziintaba, iintlambo, amachibi kunye neengxangxasi. Indawo engothusi kuphela ukuba siyadlula kuyo, kodwa yiparadesi yabo bafuna ukuhamba intaba embindini wendalo. Kule paki kukho iNtaba iSnowdon, eyona ncopho iphakamileyo eNgilane, kunye nezinye iincopho ezisezantsi ezifanelekileyo kubaqalayo kwintaba. Ngokwentsomi, encotsheni yentaba ngu-Ritha Gawr ogre, owabulawa ngu-King Arthur.
ILlandudno, yonwabela isitayile seVictorian
Le yenye yeedolophu ezithandekayo zaseNyakatho Wales, indawo ekwayindawo yeholide entle e-United Kingdom. Kukho itram enkulu enyukela encotsheni yesixeko. Ukuba yindawo ekhenketho ngoluhlobo siyazi ukuba siya kufumana zonke iintlobo zeenkonzo, ukusuka ezivenkileni ukuya kwiivenkile zokutyela, iihotele kunye neekhefi. Yaziwa ngokuhamba kwayo okuhle, kodwa nakwizakhiwo zesitayile seVictorian. Kwakhona, kubonakala ukuba kulapha apho uLewis Carroll wadibana khona nomncinci waseLondon owamkhuthaza ukuba enze 'uAlice kwiWonderland'.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » yokuPhila » Yintoni ongayibona eWales, eUnited Kingdom
Ikhrimu yelanga ngaphambi okanye emva kokuthambisa
Yintoni iHoudini syndrome?